waiyat 4334 days ago
twakatukka 4334 days ago
takeiteasy 4334 days ago
kanchho bhai 4333 days ago
twakatukka 4333 days ago
cheli 4333 days ago
*~Spring~* 4333 days ago
kanchho bhai 4332 days ago
jhyalincha 4332 days ago
fucheketo 4327 days ago
Deep 4324 days ago
Birkhe_Maila 4324 days ago
serial 4324 days ago
harikancha 4324 days ago
dipika02 4324 days ago
kanchho bhai 4323 days ago
Phatte 4319 days ago
ThahaChaena 1091 days ago
Visitor from US is reading Not again!!Plane crash near Pokahar..
Visitor is reading Mero Pravachan on Immigration Law
Visitor is reading Anybody interested in business in DFW area??
Visitor from US is reading The Crazy Idiots(Nepali)
Visitor is reading ABA BASDINA KATHMANDU KABITA SANGRAHA
Visitor is reading Cheap tickets to Nepal from USA
Visitor from US is reading NEPATHYA at Nepalese SummerFest (Memorial Day Weekend, 2012)
[VIEWED 7078 TIMES]
एउटी सुन्दरी लाई झ्याल बहिर देख्दा नै मुटु उफ्रिन थालिशक्य थियो। उनिहरु लाई गाडीमा च्ढौन खलासी झ्याल बाट टाउको छिराएर आफ्नो परिचय दिन थालयो " ल यसो अली पछाडि सरेर बसम त, ल दाजु अली सरम त"। दाजु लाई झोक चलेछ क्यारे "अब म पर सर्नी जात नै होइन भाई" पो भन्छन बुढा त। झ्याउ लागिराथ्यो, बुढा को कुरो सुनेर एक्लै हासे। "अब त सिट मुनी राखे मात्रै हो भाई"अर्की बुढी जान्ने भाईन। दिनहु यही किचलो सुनेर मेरो कान चै पाक्न मात्र बाँकी थिए। नभन्दै सुन्दरी हरु को प्रबेश भो गाडीमा, हरियाली छायो। उनिहरु त भिड पन्छ्याउदै मेरै छेउ तिर पो आउछन बा। अघी त्यो बहिर देख्दा नै मनले रोजिसकेको सुन्दरी सँग आँखा जुधिहाले, क् चाहियो र? एत्तिकै द्ङ परे म चै। गजब को कुरो "खै त नानी, म ओर्लिम भनेर " म सँगइ बस्ने बुढो त ओर्लिन पो खोज्छन त! आफ्नो छेउ को सिट खाली, छेउमै तेत्रा बिधी तरुनी, आज चै पक्कै केही हुनी भो भनेर मक्ख परे। आफुलाई यहाँ अर्कै जवान आएर बस्ला छेउमा भन्ने पिर परिसक्यो, केटी हरु चै "त बस्न, त बस्न" पो गर्छन्। आन्खिर मा त्यही मेरो मन ले खाकी चै "म बस्छु excuse me! म भित्तामा जाम्न" भन्दै पो आउछे त। आज चै भगवान ले नै म गरीब लाई "गरी खा" भनेर पठाइदेको जस्तो लाग्यो। तरुनी भित्तामा जान खोज्दै थिन, मेरा घुडाले उनका खुट्टा हरुको स्पर्स गर्ने मौका पायो। जिउ नै सिरिङ्ग भएर आयो। ऊ त अझै मै पट्टी फर्केर उस्का साथी हरु सँग कुरा पो गर्न थालि। उनको यो वार्तालाप को सिलसिलामा उनी सँग निकै आँखा जुधे। हरेक जुधाइमा आफ्नो कमजोर मन, भुइचालो गैहाल्ने। मलाई नि उनिसँग को यो आँखा जुधै को खेल खुब रमाइलो लगिराथ्यो, उनी त झ्याल बहिर पो हेरेर बस्न थालिन।
मैले अगाडि बढेर कुरो नगरने ताल बुझिछन क्यारे आँफैले "अनी आफ्नो नाम चै के नि"भनेर सोधिन। मैले तुरुन्तै "कान्छो भाई" भन्या मात्र के थिए पछाडि बाट सुन्दरी हरु हामी सँग introduction गरे चै पाप लाग्छ कि के होउ, कुसुम सँग मात्रै कुसुमे रुमाल साट्नि?" " भन्न थाले। पाये त तिमीहरु सबै लाई लान्छु नि, भनम जस्तो नलाग्या नि कहाँ हो र, भन्न मिलेन। बातावरण निकै रमाइलो हुँदै थियो, बानेस्वोर अाइपुगिसकेछ। कती छिटो आको हो? हिजो-अस्ती त कहिले आउला जस्तो हुन्थ्यो, आज त उर्बशी हरु को बिचमा केही होशै भएन रहेछ।